Izithasiselo zepulasitiki, i-Plastic Optical Brightener, i-Plastic Uv Absorber - Ukuzalwa kabusha
INanjing Reborn New Materials Co., Ltd. yasungulwa ngo-2018, ingumhlinzeki wobungcweti bezithasiselo ze-polymer eChina, inkampani etholakala eNanjing, esifundazweni saseJiangsu.
Imikhiqizo ihlanganisa i-Optical Brightener, i-UV Absorber, i-Light Stabilizer, i-Antioxidant, i-Nucleating Agent, i-Intermediate nezinye izithasiselo ezikhethekile. Izembozo zohlelo lokusebenza: ipulasitiki, ukumboza, upende, uyinki, injoloba, njll.
UKUzalwa kabusha kuphikelela “Ukuphathwa okuhle kokholo. Ikhwalithi yokuqala, ikhasimende liphezulu ”njengenqubomgomo eyisisekelo, qinisa ukuzakhela. Thina R & D imikhiqizo emisha ngokubambisana ne-University, ukugcina ngcono izinga lomkhiqizo kanye service. Ngokuthuthukiswa nokulungiswa kwemboni yokukhiqiza yasekhaya, inkampani yethu iphinde inikeze ngezinsizakalo eziphelele zokubonisana ngentuthuko yaphesheya kwezilwandle nokuhlanganiswa nokutholwa kwamabhizinisi asezingeni eliphakeme asekhaya. Ngasikhathi sinye, singenisa izithasiselo zamakhemikhali nezinto zokusetshenziswa phesheya kwezilwandle ukuhlangabezana nezidingo zemakethe yasekhaya.
Sibutsetelo sePulasitiki Yokuguqula Imboni
Ukubuka konke ngemboni yokuguqulwa kwepulasitiki Isichasiso nezimpawu zepulasitiki Lobunjiniyela bamaplastikhi namapulasitiki ajwayelekile ...
Ithemba lokusebenza le-o-phenylphenol
Ithemba lokufaka isicelo le-o-phenylphenol O-phenylphenol (OPP) luhlobo olusha olubalulekile lwemikhiqizo yamakhemikhali emihle kanye nabaxhumanisi bezinto eziphilayo. It is kabanzi emkhakheni inzalo, anti-ukugqwala, ukuphrinta kanye ukudaya auxil ...
Isinqandakuvunda nesikhunta sokumbozwa
Isinqandakuvunda nesikhunta sokumbozwa Ukumbozwa kufaka phakathi i-pigment, i-filler, i-color paste, i-emulsion ne-resin, i-thickener, i-dispersant, i-defoamer, i-ejenti yokulinganisa, umsizi owenza ifilimu, njll. Lezi zinto zokusetshenziswa ziqukethe umswakama kanye ne-nutrie ...